Kuunganidza Ropa Tubes Fakiti | China Ropa Kuunganidza Tubes Vagadziri, Suppliers
Iyo chena chengetedzo cap inoratidza kuti yeropa rekuparadzanisa gel uye EDTA-K2 yakawedzerwa kune tube. Mushure mekurapa kwakakosha iyo enzyme yeDNA, RNA enzyme mune iyi fungidziro inogona kubviswa neCo 60 yekudiridza manyowa kuti ive nechokwadi chekugadzika kwechigadzirwa mu test tube. Nekuda kwekuwedzera kweiyo yekuparadzanisa gel uye madziro ehubhu nekubatana kwakanaka, mushure mekuita centrifuge, iyo inert yekuparadzanisa glue inogona kusiyanisa zvachose kuumbwa kwemvura uye zvikamu zvakasimba muropa uye kuunganidza zvakazara chipinganidzo mukati mehubhu kuenda. chengetedza yakasimba yeanofungidzira pamwe nekupisa kupisa uye kusimba.
Imadziro yemukati meiyo yekuunganidza ropa chubhu yakasunganidzwa zvakafanana ne heparin sodium kana lithium heparin, iyo inogona kuita chiito nekukurumidza pamasampuli eropa, kuitira kuti mhando yepamusoro yeplasma inogona kukurumidza kuwanikwa. Pamusoro pehunhu hwe heparin sodium, lithium heparin haina zvakare kukanganiswa neiyo ion kusanganisira sodium ion, saka inogona kushandiswawo pakuonekwa kwezvinhu zvekutsvaga.
Glucose chubhu inoshandiswa mukuunganidzwa kweropa kumuyedzo wakadai shuwa ropa, kushivirira shuga, erythrocyte electrophoresis, anti-alkali hemoglobin uye lactate. Iyo yakawedzerwa Sodium Fluoride inodzivirira metabolism yeshuga yeropa uye Sodium Heparin inogadzirisa zvinobudirira kugadzirisa hemolysis. Nekudaro, iyo yekutanga mamiriro eropa anozogara kwenguva yakareba uye anovimbisa yakagadzika danho rekuyedza shuga yeropa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri. Inesarudzo yekuwedzera ndeye Sodium Fluoride + Sodium Heparin, Sodium Fluoride + EDTA.K2, Sodium Fluoride + EDTA.Na2.
Iko kusangana kwe sodium citrate ndeye 3,8%. Kuwanda kwehuwandu hweanticoagulant vs. ropa iri l: 4. Iyo inowanzoshandiswa kweropa sedimentation bvunzo. Yakakwira vhoriyamu yeanticoagulant inodonhedza ropa uye nekudaro, inosimudzira uwandu hwekusheta kweropa. Nekuda kwehuremu hushoma uye nekumanikidza kwakashata mukati mehubhu, inoda imwe nguva yekuunganidzwa kweropa. Mirira nokushivirira kusvikira ropa ramira kuyerera mukati mehubhu.
Sodium citrate inoshanda seanti-coagulant kuburikidza chelation ine calcium muropa. Kugadziriswa kweasodium citrate ndeye 3.2% uye huwandu hwehuwandu hwe anti-coagulant vs. ropa riri l: 9. Iyo inonyanya kushandiswa kwecagulation test (prothrombin nguva, nguva thrombin, inoshanda chikamu chidimbu thromboplastin nguva, fibrinogen). Iyo yekuvhenganisa chiyero ndeye 1 chikamu citrate kune zvikamu zve9 yeropa.
EDTA iaminopolycarboxylic acid uye inoshanda chelating inonyatso kutevedzera calcium ion muropa. "Chelated calcium" inobvisa calcium kubva kune yekuita saiti uye inomira endo native kana exo native ropa kusangana. Kuenzaniswa nemamwe coagulants, kukanganisika kwaro kusangana kweropa uye cell cell morphology idiki. Naizvozvo, EDTA munyu (2K, 3K) inowanzoshandiswa sevanomhanya mukuwongorora ropa nguva dzose. Edta munyu haishandiswe mune kumwe kuedzwa kwakadai sekubuda kweropa, kutsvaga zvinhu uye PCR.
Coagulant yakasungirirwa pamadziro emukati meyipi-inounganidza ropa, ichikurumidzira kuwedzerwa kweropa uye kuderedza nguva yekuedza. Tube ine gel yekuparadzanisa, iyo inonyatsoparadzanisa eropa fluid chinhu (serum) kubva kune yakasimba chigadzirwa (masero eropa) uye inokanganisa zvikamu zviviri zviri mukati mehubhu zvine chipinganidzo. Chigadzirwa chinogona kushandiswa kweropa biochemistry bvunzo (chiropa basa, renal basa, myocardial enzyme basa, amylase basa, nezvimwewo), serum electrolyte bvunzo (serum potasium, sodium, chloride, calcium, phosphate, nezvimwewo), chirwere chechiropa, AIDS, tumor mamaki , serum immunology, kuedza kwemishonga, nezvimwe.
Coagulation tube inowedzerwa neyakaomarara, inoshandisirwa thrombin uye inoshandura iyo soluble fibrinogen kuva isinganyunguduke fibrin polymer, iyo inowedzera kuve fibrin inosangana. Coagulation tube inoshandiswa kukurumidza kuongorora biochemical mune yekukurumidza kuiswa. Yedu coagulation tube inewo eropa glucose stabilizer uye inotsiva yechinyakare ropa glucose anti-coagulation tube. Nekudaro, hapana anopesana neyekudyidzana mumiriri sodium sodium fluoride / potasium oxalate kana sodium fluoride / heparin sodium inodiwa kuitira miedzo yeropa glucose uye kushivirira glucose.
Serum chubhu inoparadzanisa serum kuburikidza neyakajairika maitiro eropa coagulation uye serum inogona kuenderera zvakare kushandiswa mushure mekuita centrifugation. Serum tube inonyanya kushandiswa mu serum bvunzo dzakadai serum biochemical kuongorora (basa rechiropa, basa retsvo, myocardial enzymes, amylase, nezvimwe.), Kuongorora kwe electrolyte (serum potasium, sodium, chloride, calcium, phosphorus, nezvimwewo), basa rehuro AIDS, tumor mamaki uye serology, kuedza zvinodhaka, nezvimwewo.